साथ पनि टीआरसी "जुन" को उद्घाटन संग Cherepovets को शहर मा, किनमेल केन्द्र को चौथो तल्ला मा फिटनेस क्लब, "एलेक्स फिटनेस" साथ दिए।
देश को लगभग हरेक प्रमुख सहरमा यो बिन्दुमा रूपमा कम्तीमा एक क्लब कि नेटवर्क कार्य। खुसीको कुरा, नेटवर्क व्यवस्थापन बचाउनुभयो र Cherepovets छैन। "एलेक्स फिटनेस" यहाँ धेरै समय खर्च गर्न खुसी छन् जो लगभग सबै townspeople, धेरै लोकप्रिय भएको छ।
कुनै कुरा छैन, राति बिहान सबेरै वा ढिलो, townspeople जिम गर्न "एलेक्स फिटनेस" (Cherepovets) मा भागे। को फिटनेस क्लब को सञ्चालनको मोड पनि हप्तादिन मा, एक ठूलो उपस्थिति योगदान पुग्छ। क्लब रूपमा प्रारम्भिक रूपमा7हूँ सबै पर्यटकहरूलाई यसको ढोका खुल्छ, र बिहान मात्र 12 बजे मा बन्द गर्छ। धन्यवाद यो सुविधाजनक तालिका गर्न, Cherepovets "एलेक्स फिटनेस" को शहर को सबै बासिन्दाहरू धेरै लोकप्रिय छ।
सेवा र विशेष प्रस्ताव
यसको नाम विपरीत, यो फिटनेस क्लब आगंतुकों मात्र कसरी, एक समूह कोठा बाहिर काम गर्न आफ्नो कोच संग विभिन्न कार्यक्रम पूरा मौका प्रदान गर्दछ।
पहिलो सारा Cherepovets, "एलेक्स फिटनेस" आफ्नो ग्राहकहरु गर्दा एक संगठन यी कार्यक्रम को लागि विशेष डिजाइन, व्यक्तिगत काम गर्न सक्छन् तथाकथित कर्पोरेट फिटनेस प्रदान गर्दछ।
"एलेक्स फिटनेस" एक कसरत समूह पाठ मात्र होइन तर कसरी जिम मा मांसपेशीमा बाहिर काम गर्न प्रदान गर्दछ। स्वाभाविक, सबै प्रशिक्षण योग्य छन् जो अनुभवी trainers को निर्देशन अन्तर्गत सञ्चालन र उनि गंभीर थकान लागि पहिलो सहायता कसरी दिन थाहा छ। त्यसैले उनको स्वास्थ्य को लागि एक कसरत पछि डर छैन - तपाईं निगरानी अन्तर्गत हुनेछु।
व्यावसायिक र अवैतनिक बक्सिङ लागि, "एलेक्स स्वास्थ्य," यो खेल को लागि विशेष डिजाइन अलग क्षेत्रहरु छ।
र आराम र एक कठिन र थकित व्यायाम पछि खोलन बाहिर द्वीपसमूह कसरी गर्न, खेलाडीहरूलाई एक फिनिस सना समय खर्च गर्न सक्नुहुन्छ।
यो क्लब सारा Cherepovets लागि सबै भन्दा राम्रो गतिविधिहरु को एक मानिन्छ। "एलेक्स फिटनेस" यो स्थिति राख्ने, अतिरिक्त सेवाहरू को एक महान विविधता शुरू।
शुरुआती बीच धेरै लोकप्रिय छ जो अतिरिक्त सेवा, - व्यक्तिगत प्रशिक्षक। यसबाहेक, यस व्यक्ति मिसिन परिचित मात्र होइन, तर पनि समूह प्रशिक्षण मा एरोबिक व्यायाम को एक किसिम कसरी गर्न सिक्न मदत गर्न सक्छ।
क्लब मा टेबल टेनिस को सबै प्रशंसक लागि रमाइलो हुन सक्छ जहाँ एक टेनिस तालिका स्थापित।
प्रेमीहरूको खेल मार्फत, क्लब इच्छित परिणाम हासिल गर्न आफ्नो आहार समायोजन गर्ने प्रस्ताव मात्र क्रममा आफ्नो शरीर दिनुहोस्। र तपाईं आफ्नो उपस्थिति संग पहिले नै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, तर तपाईं सूर्य को कमी खुसी छैन भने, तपाईंले प्रत्येक लकर कोठामा सेट धूपघडी, प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एक सुन्दर खेल आंकडा ताजा तन हाइलाइट गर्दा भन्दा राम्रो केही छ।
प्रत्येक आगन्तुक क्लब, "एलेक्स फिटनेस" को क्षेत्र मा भयो कि कुनै पनि दुर्घटना लागि बीमा भुक्तानी गरिनेछ भनेर क्लब मा, जीवन र स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्दछ।
त्यहाँ तपाईं clubhouse, "एलेक्स फिटनेस" (Cherepovets) मा प्रशिक्षण को मूल्य सिक्न सक्छौं जो धेरै तरिकाहरू छन्। फोन 8 (820) 261-37-37 - शायद सबै भन्दा सुविधाजनक तरिका वर्तमान मूल्य र निरन्तर पदोन्नति सिक्न। क्लब प्रशासकहरूले अनुरोध सेवाहरूको अनुमानित लागत आफ्नो सबै प्रश्नहरूको जवाफ र सल्लाह खुसी छन्।
पनि प्रशिक्षण को लागत "एलेक्स फिटनेस" को आधिकारिक वेबसाइट सम्भव छ बारे पत्ता। वास्तवमा, यो क्लब Cherepovets शहर सबैभन्दा महंगा एक मानिन्छ। "एलेक्स फिटनेस" आफ्नो ग्राहकहरु यसरी, यो पनि असुरक्षित खेलाडीहरूलाई मा, धेरै लोकप्रिय छ, टिकट र बिहान कक्षाहरू विशेष प्रस्तावहरू प्रदान गर्दछ।
र "एलेक्स फिटनेस" चयन गर्न केही थप कारणहरू
1 यो प्रशिक्षण लागि मात्र आधुनिक र serviceable उपकरण छ।
2. यो कोचिंग कर्मचारी, जहाँ प्रत्येक टोली सदस्य आवश्यक योग्यता छ।
3. यो सबै समूह कार्यक्रम को लागि आवश्यक उपकरण हो।
4 यो प्रशिक्षण सञ्चालन मा एक महान अनुभव छ।
Headstand। तपाईं यो तपाईं चाहिन्छ?
मांसपेशीमा बलियो बनाउन Skittle व्यायाम
अनुहार लागि चार्ज। सर्वश्रेष्ठ अनुहार झुर्रियाँ चार्ज
सिम्युलेटर "Vander कोरि स्मार्ट": समीक्षा
Gordeev Aleksey Vasilevich। Gordeev - राज्यपाल। जीवनी, फोटो
AliExpress मा आदेश रद्द गर्न कसरी। चिनियाँ व्यापार मंच मा खरीद परित्याग विशेषताहरु
ब्राड पिट: अभिनेता गरेको Filmography। ब्राड पिट बारेमा समाचार
जीपीएस नेभिगेटर र विशेष गरी आफ्नो विकल्प